Nitohy ny grevin’ny mpianatry ny oniversite Maninday: mpanao fihetsiketsehana iray maty voatifitra, 17 voasambotra | NewsMada
Nitohy, omaly, ary vao mainka nihanahery vaika ny hetsika fitakiana nataon’ny mpianatry ny Oniversiten’i Maninday, Toliara. Vokatry ny fifanjevoana, mpanao fihetsiketsehana iray namoy ny ainy, hoe maty voatifitra. Enina naratra, anisan’izany ny zandary roalahy…17 kosa nosamborin’ny mpitandro filaminana…
Nihorohoro tanteraka, omaly, ny mponina ao Toliara nandritra ny tohin’ny hetsika nataon’ireo mpianatry ny oniversiten’i Maninday. Nitohy ny fihetsiketsehana nataon’ny mpianatra ary nihanahery vaika izany raha mitaha amin’ny afakomaly. Nanomboka maraina no efa nanao sakana toy ny fanaon’izy ireo ireto mpianatra mpanao fihetsiketsehana ireto. Efa nihatrana maraina koa anefa ny eo anivon’ny mpitandro filaminana hanakanana ny fanelingelenana ataon’izy ireo. Nosakanana tsy hahazo miditra ao an-drenivohitr’i Toliara ireo mpianatra. Teo koa ireo andiany hafa nanao sakana tamin’ny alalan’ny sakana sy ny doro kodiarana. Nisy ny fifandonana ary somary nahery vaika aza izany, araka ny fanazavana voaray avy amin’ny solontenan’ireo mpianatra. Nanomboka tamin’ny 9 ora maraina ny fifandonan’ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana ka tsy nifarana izany raha tsy tamin’ny 3 ora tolakandro (omaly io). Ny mpianatra mitoraka, ny mpitandro filaminana kosa, nanapoaka grenady lakrimozena sady nanao tifi-danitra.
Niala ny trano fonenany ireo mpampianatra…
Vokany, mpanao fihetsiketsehana iray fantatra fa namoy ny ainy, hoe maty voatifitra nandritra ny savorovoro izy io. Tsy voamarina kosa anefa na anisan’ireo mpianatra nanao fihetsiketsehana izy io na olon-tsotra ihany, araka ny voalazan’ny tompon’andraikitry ny oniversiten’i Maninday. Efa nalefa ao amin’ny Hopitalibe Toliara ny razana, omaly maraina ihany. Ankilany, olona enina naratra mafy ka anisan’izany ny zandary roa lahy tratran’ny tora-bato. Niampy 17 hafa indray ireo mpianatra voasambotra ankoatra ireo 18 efa tazonina anaovana fanadihadiana eny amin’ny zandary. Vao mainka nampiakatra ny hatezeran’ireo mpianatra izany ka niitatra tonga teny amin’ny faritra misy ny tranona mpampianatra ao Ankilahila Maninday ny fihetsiketsehana. Kilan’ny afo ka potika tsy nisy noraisina intsony tamin’izany ny tranona mpampianatra iray. Vokatr’izany, niala avy hatrany teny amin’ny faritra misy ny trano fonenan’ireo mpampianatry ny oniversite ny ankamaroan’ireo mpampianatra noho ny tahotra.
Miato ny fampianarana eny amin’ny oniversiten’i Maninday…
Manoloana ity zava-misy niafara tamin’ny fahafatesan’olona ity, nanao fanambarana ny filohan’ny oniversiten’i Toliara taorian’ny dinika niarahana amin’ny “conseil scientifique” omaly ka nampiato ny fampianarana manomboka anio mandra-pilamin’ny toe-draharaha eny Maninday. Nanamafy ireo mpianatra fa mbola hitohy ny hetsika ary vao mainka aza ho mafy no ho izao na inona na inona fepetra horaisin’ny fanjakana eo satria efa leo tanteraka mihitsy. Nanidy toeram-pivarotana avokoa ireo tranombarotra ao Toliara, nandritra ny hetsika nataon’ny mpianatra. Andrasana indray ny tohin’ny hetsika anio. Olana saro-bahana tsy ahitam-bahaolana matetika ity olana eny anivon’ny oniverisite ity.